Global Voices teny Malagasy » Hetsik’ireo Grika Mpandàla Ny Fanjakan’ny Baroa Manohitra Ny Fanavakavaham-bolonkoditra, Atao An-tsary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Oktobra 2012 12:37 GMT 1	 · Mpanoratra Maria Sidiropoulou Nandika (en) i Veroniki Bacharidi-Krikoni, imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Andrefana, Gresy, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Krizy any Eoropa  ity lahatsoratra ity.
Nahazo toerana tany afovoan-tananan”i Atena, any Grika, tamin'ny Asabotsy 1 Septambra 2012 teo, ny fihetsiketsehana manohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra, izay niainga avy tao amin'ny Kianja Monastiraki .
Mpanao fihetsiketsehana anjatony, indrindra ireo mpiandany amin'ny fanjakan'ny baroa, no nitangorona nanao fihetsiketsehana manohitra ireo tranga nisy tato ato toy ny herisetra, eny izay tena misy mahafaty mihitsy aza, herisetra atao amin'ireo mpifindra monina  [el] ataon'ireo ‘extremistes’ mpikambana ao amin'ny vondrona Golden Dawn  avy amin'ny elatra havanana, ny fanarabiana ireo mpivarotena mitondra ny otrikaretina VIH ataon'ireo polisy , ary ny fanentanana ‘Xenios Zeus’ an'ny governemanta manakana misava [ikendrena indrindra indrindra ireo olona mainty hoditra amin'ny taratasy famantarana azy ireo].
Mpanao fihetsiketsehana mitangorana ao Monastiraki. Sary nalain'ny mpanoratra.
Niroso nankeny amin'ny Kianja Omonoia ireo mpanao fihetsiketsehana nihazo an'i Lalambe Athinas ary nifarana teo Monastiraki indray. Nampitandrina azy ireo ny polisy mpandrava korontana  tsy hanohy ny diany ho eny amin'ny Lalambe Panepistimiou [lalana izay mitondra mankany amin'ny Parlemanta Grika], na izany aza, tsy nisy akory ny loza nitranga, afa-tsy zavatra madinidinika toy ny fifamaliana am-bava teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sasany sy ny polisy.
Ireo mpanao fihetsiketsehana tany amin'ny Kianja Omonoia. Sary nalain'ny mpanoratra.
Sora-baventy nentin'ny mpanao fihetsiketsehana mivaky hoe : “Andeha hopotehina ireo fasista sy polisy mpamono olona. Enga anie hifamono ireo mponina eo an-toerana sy ireo mpitsoa-ponenana”. Sary nalain'ny mpanoratra.
Ireo mpanao fihetsiketsehana voasakana tao amin'ny Lalambe Panepistimiou. Sary nalain'ny mpanoratra.
Maromaro ny fihetsiketsehana nitranga tato ho ato, izay nokarakarain'ny fikambanana maro samihafa samy manana ny firehany  [el]. Afaka mijery saripika vitsivitsy ahitana ireo fanoherana ny fankahalana ny fanavakavaham-bolonkoditra tamin'ny 24 Aogositra tany Atena ianao eto amin'ity lahatsary  manaraka ity, indrindra hoe tohanan'ny mpitsoa-ponenana izy ity :
Tsy dia mametraka olana eo amin'ny fanavakavahana ara-bolonkoditra ny ankamaroan'ny vahoaka Grika, na inona na inona ny politika arahany. Voarafitra any Grika ihany koa izao ny Fasisma, satria lany tamin'ny parlemanta  ny antoko neo-nazista.
Manohitra mafy mihitsy ity lahiantitra. Sary nalain'ny mpanoratra.
Mihatonga saina ny fiarahamonina Grika fa loza goavana mitatao ny fanavakavaham-bolonkoditra ka tsy maintsy hatrehina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/10/09/37970/
 Krizy any Eoropa: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/europe-in-crisis/
 Kianja Monastiraki: http://en.wikipedia.org/wiki/Monastiraki
 herisetra atao amin'ireo mpifindra monina: http://tvxs.gr/news/ellada/epitheseis-kata-metanaston-sti-mixanokiniti-poreia-tis-xrysis-aygis
 Golden Dawn: https://mg.globalvoices.orgen.wikipedia.org/wiki/Golden_Dawn
 mpivarotena mitondra ny otrikaretina VIH ataon'ireo polisy: http://www.ksm.gr/%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%81/
 ny fanentanana ‘Xenios Zeus’ an'ny governemanta manakana misava : https://twitter.com/northaura/status/242198503747629056
 polisy mpandrava korontana: http://en.wikipedia.org/wiki/Units_for_the_Reinstatement_of_Order
 izay nokarakarain'ny fikambanana maro samihafa samy manana ny firehany: http://www.aformi.gr/2012/08/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
 lany tamin'ny parlemanta: http://www.huffingtonpost.com/2012/06/17/golden-dawn-election-results_n_1604097.html